बाबुरामकाे अन्तर्वार्ता काण्डले उब्जाएका सवालहरू - Khabarshala बाबुरामकाे अन्तर्वार्ता काण्डले उब्जाएका सवालहरू - Khabarshala
बाबुरामकाे अन्तर्वार्ता काण्डले उब्जाएका सवालहरू
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्तामा उनले अपाच्य शब्दको प्रयोग भन्दै रेडियो नेपालले सार्वजनिक विज्ञप्ती निकालेर वेवसाइटबाट हटाएपछि पत्रकारिताको क्षेत्रमा अनेक सवाल उठेका छन् । लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै र अध्यापन गराउँदै आएका विज्ञान शर्माले यो घटनालाई यसरी व्याख्या गरेका छन् ।
१. बाबुराम भट्टराईले अपशब्द बोलेको भन्दै रेडियो नेपालले विज्ञप्ति निकालेको छ । सरकारी मिडियामा कन्टेन्टमाथि सरकारको खुलेआम नियन्त्रण छ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ, जुन अशोभनीय मात्र होइन, आपत्तिजनक छ ।
२.रेडियो नेपालबाट २०६९ साल १६ पुस बिहान प्रसारित ‘अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ मा नेपाली कांग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराईबाट व्यक्त गरिएको विचारप्रति सरकारले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कार्की र कार्यक्रम प्रस्तोता प्रमोद दाहालसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो । बाबुराम पनि उस्तै हुन् भन्ने टिप्पणी पनि आएको छ । त्याे घटना पनि आपत्तिजनक थियो भन्ने बुझौं ।
३. सरकारका समर्थक र विरोधीहरुलाई एकअर्का माथि भिड्न आज सार्वजनिक घटना र सात वर्षअघिको त्यो घटना काफी छन् । जति सकिन्छ, हिर्काउन सकिन्एछ एकअर्कालाई । तर यसाे गर्नु ठीक हाे? साेँचाै ।
४. निष्पक्ष भएर ठण्डा दिमागले सोचौं– हामीले पात्रको विरोध गर्ने कि प्रवृत्तिको? सरकारी सञ्चार माध्यम जनताको सञ्चार माध्यम हो, समर्थक, विरोधी, पक्ष प्रतिपक्ष सबै अटाउन सक्नुपर्छ । रेडियो नेपाल जनताको करले चल्ने संस्था हो । पात्रको विरोध हो भने बुझौं, हामीभित्रको निष्पक्षताको चेत सकियो ।
५. त्यसो भए सञ्चार माध्यममा अपमान गर्न पाइन्छ ? जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर यसरी खोजौं ।
हरेक सञ्चार माध्यमको आफ्नै सम्पादकीय नीति हुन्छ । के श्लील, के अश्लिल, के विषयलाई प्राथमिकता दिने, को सँग अन्तरर्वार्ता लिने, कसप्रति वफादार हुने आदि । यदी कुनै कन्टेन्ट सम्पादकीय नीतिभन्दा बाहिर गएर प्रकाशन प्रसारण भयो भने आन्तरिक समीक्षा हुन्छ र गल्ती दोहोरिन नदिने उपायहरुको अवलम्बन गरिन्छ ।
यसरी घरको गल्ती दुनियाँलाइ भन्दै हिँडिदैन । सार्वजनिक विज्ञप्तिले रेडियो नेपालको कन्टेन्ट छनोटमा कुनै सम्पादकीय नीति नरहेको प्रस्ट पार्छ । अझ भन्नुपर्दा उक्त अन्तरवार्ता रेडियो नेपालको उत्पादन होइन, प्रस्तोताको व्यक्तिगत उत्पादन हो की भन्ने सन्देश गएको छ । वक्ताले बोलेको बोल्दै गरेको कुरा सम्पादकीय नीतिको विरूद्द भए लाइभ भए पनि तत्काल कार्यक्रम काट्न सकिन्छ । यसलाइ सम्पादकीय नीतिअनुसार मिडियाले स्पस्टिकरण दिन सक्छ ।
६. विज्ञप्ती निकालेर रेडियो नेपालले के पायो ? सरकारले के पायो ? रेडियो नेपालको विज्ञप्ति इतिहासकै झुर घटना भन्छु म । त्यो भन्दा पनि रेडियो नेपालका सञ्चालक र विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउने निर्देशकहरुको कुवुद्धिको पराकाष्ठा भन्ठान्छु । त्यसको कारण छ । कुनै विषयमाथि खण्डन गर्नुपर्यो भने यस्तो विज्ञप्ति निकालिन्छ ।
सरकारलाइ जोगाउने नाममा सरकारका सहयोगीहरूले नै सरकारको लाज फुस्काइदिने काम बन्द गराैं ।
विज्ञप्तीको उद्देश्य जनतामा छवि बिगार्ने होइन, छवि राम्रो बनाउने हो । जब रेडियो नेपालको त्यो अन्तर्वार्ता धेरैले महत्व दिएका थिएनन्, बाबुरामले प्रधानमन्त्रीलाई भस्मासुर भनेको धेरैलाई थाहै थिएन । जनतालाई थाहै नभएको विषयमाथि विज्ञप्ती निकाल्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाबुरामले भस्मासुरको संज्ञा दिएको धेरैलाई थाहा भयो ।
त्यो भन्दा पनि खतरा उक्त अन्तर्वार्ता भाइरल भयो । अर्थात सरकार र रेडियो नेपाल जुन कुरा लुकाउन चाहन्थे वा जसरी सरकारको राम्रो छवि गराउन चाहन्थे ठ्याक्कै उल्टो भयो । सञ्चारमाध्यमको मल्टिप्लायर प्रभावबारे न्युनतम ज्ञान भएको भए यो विज्ञप्ती जारी हुने थिएन ।
७. अन्त्यमा, सरकारका सहयाेगीहरू (रेडियो नेपाललगायत)लाई सुझाव– आमसञ्चारअन्तर्गत राजनीतिक संचार, जनसम्पर्क जस्ता विभिन्न विधागत विषयहरु अध्ययन गर्न पाइन्छ । सक्नुहुन्छ, औपचारिक शिक्षा लिनोस् । सकिन्न, अनौपचारिकरूपमा अध्ययन गर्नोस् । कस्तो बेला प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, कस्तो बेला घटनालाई इग्नोर गर्ने । सरकारको छवि निर्माण गर्न मिडीया, प्रतिपक्ष सबैलाई गाली गर्दै भाषण गर्ने की सभ्य भएर जनता रिझाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । सरकारलाइ जोगाउने नाममा सरकारका सहयोगीहरूले नै सरकारको लाज फुस्काइदिने काम बन्द गराैं ।